စစ်တုရင် 2.6.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.6.4 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ဘုတ္ စစ်တုရင်
စစ်တုရင် ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့ Android အတွက်စစ်တုရင်
စစ်တုရင်နှစ်ခုကစားသမားတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာရှစ်ရင်ပြင်နှင့်အတူ, 64 အသေးရင်ပြင်၏ဖန်ဆင်းတစ်စတုရန်းဘုတ်အဖွဲ့, ကစားသည်။ ရှစ် pawn နှစ်ခုနိုက်နှစ်ခုခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်, နှစ်ဦး Rook တပါးမိဖုရားနှင့်ရှင်ဘုရင်တပါးတည်းသာလျှင်: တစ်ခုချင်းစီကစားသမားခြောက်ယောက်အပိုငျးပိုငျးနှင့်အတူစတင်သည်။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပြိုင်ဘက်တို့၏ရှင်ဘုရင်ကြိုးစားနှင့် checkmate မှတစ်ခုချင်းစီကစားသမားအဘို့ဖြစ်၏။ Checkmate မျှမပြောင်းရွှေ့ရပ်တန့်နိုင်သောဆန့်ကျင်သည့်ရှငျဘုရငျအားခြိမ်းခြောက်မှု ('စစ်ဆေးရန်') သည်။ ဒါဟာဂိမ်းပြီးဆုံး။
ဂိမ်းအတွင်းတွင်နှစ်ဦးကိုပြိုင်ဘက်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစတုရန်းမှသူတို့ရဲ့အပိုငျးပိုငျးတစျခုပြောင်းရွှေ့ရန်အလှညျ့ယူ။ One ကိုကစားသမား ('အဖြူရောင်') တစ်ဦးအလင်းအရောင်၏အပိုငျးပိုငျးရှိပါတယ်, အခြားကစားသမား ('အနက်ရောင်') မှောင်မိုက်အရောင်၏အပိုငျးပိုငျးရှိပါတယ်။ အပိုငျးပိုငျးရွှေ့ဘယ်လိုအကြောင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ပိတ်ခြင်းပြိုင်ဘက်ရဲ့အပိုငျးပိုငျးယူ ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပါသည်။ အဖြူအပိုငျးပိုငျးနှင့်အတူအဆိုပါကစားသမားသည်အမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးပြောင်းရွှေ့စေသည်။ ထိုကြောင့်, White သေးငယ်တဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်နှင့်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းမှာပိုပြီးမကြာခဏအနက်ရောင်ထက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
စစ်တုရင်ရေပန်းစားသည်နှင့်မကြာခဏစစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုခေါ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံအများအပြားအတွက်ခံစား, နှင့်ရုရှားအတွက်အမျိုးသားရေးဝါသနာဖြစ်ပါတယ်။
-7လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစစ်တုရင်ဘုတ်အဖွဲ့အရောင်များ
-6လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းရွေးချယ်
- operate နေလည်း
- Load နှင့် Save ကို Chess ဝတ်စုံ
စစ်တုရင် အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ်တုရင် အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
စစ်တုရင် အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
စစ်တုရင် အား အခ်က္ျပပါ
buymore11 စတိုး06.99k
စစ်တုရင် ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း စစ်တုရင် အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Chess Prince
App Name: စစ်တုရင်
Release date: 2019-09-15 10:19:01
လက်မှတ် SHA1: BB:F4:2D:7C:46:61:95:85:92:13:46:85:73:5F:E2:B7:71:1D:11:40
ထုတ်လုပ်သူ (CN): hbclzkdyufg
အဖွဲ့အစည်း (O): oimnfckjasdf
နယ်မြေ (L): jkhksdjfhj
နိုင်ငံ (C): dm
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): djdj
စစ်တုရင် APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ